Maalinta Caruuta Aduunka oo si weyn looga xusay magaalada Boosaaso+Sawiro – SBC
Maalinta Caruuta Aduunka oo si weyn looga xusay magaalada Boosaaso+Sawiro
Posted by Webmaster on November 20, 2012 Comments
Xaflad Si heersare ah loo soo agaasimay ayaa maanta lagu qabtay Hotelka Banorama ee gudaha Magaalada Boosaaso.
Xafladan oo lagu xusayay Maalinta Caruurta Aduunka aya waxaa soo qaban qaabiyay Wasaarada haweenka iyo Horumarinta Qoyska Puntland Qeybteeda Gobolka Bari, waxaana goob joog ahaa masuuliyiin ka kala socotay Dowlada Puntland iyo Hay’adaha Caalamiga ah ee ka shaqeeya Arimaha Caruurta Sida Save The Children, Tadamun iyo Hayado kale.
Xafladan ayaa ahayed mid ay ka soo qeyb galeen sidoo kale Caruur maadaama ay tahay Xuska Maalintooda iyagoo halkaasi ku soo bandhigay warbixino iyo su’aalo ay weydiiyeen Martisharaftii ka so qeybgashay sida, Madaxda Puntland, Hay’adaha iyo weliba Hooyooyinka .
Waxaa halkaasi Hadalo Khiimo badan ka soo jeediyay Madaxdii isugu timid iyadoo ugu horeyn ay halkasi ka hadashay Gudoomiye ku xigeenka Degmada Boosaaso Siciid C/raxmaan Garoon oo halkaasi ka sheegay in Maanta ay maalin Qiimo leh u tahay Caruurta Aduunka gaar ahaan kuwa Somaaliyeed ayna tahay in caruurtu soo badhigaan wax alaala waxii maankooda ku jira kana gudoomi doonaan.
Waxaa iyana halkaasi Hadlo ku aadan xuska Maalintaan ka jeediyay masuuliyiin ka socotay hay’adaha halkaasi ku sugnaa sida Save The Children Waxaana uu sheegay Abukufele in maalintan qaaliga ah aysan xusitaankeeda mid laga xusayo Boosaaso Keliya balse laga xusayo dhamaan Aduunka oo idil.
Waxa uu Abu Kufela u mid mid ula hadlay Marti sharaftii ka soo qeyb gashay xaflada sida Hooyooyinka oo uu sheegay in ay door muhiim ah ku yihiin maalintan, waxaa kale oo uu la hadlay caruurta yar yare e halkaasi ku sugneyd isagoo ugu hambalyeeyay xuska Maalintooda.
Ayaan Nuur oo ah u qaabilsanaha wasaarada Haweenka Puntland e gobolka Bari ayaa iyana halkaasi ka sheegtay in hooyooyinku ay door muhiim ah ka yihiin arimaha Caruurta iyadoona ugu hambalyeysay Caruurta Aduunka Xuska Malitan.
Maxamuud Cabdi siciid (Fantastic)
wiilbari boosaaso says: